ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းရှိရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်များ | iMyanmarHouse.com
သိန္း 300 မွ သိန္း 400 ထိ ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်များ
ဈေးနှုန်း သိန္း 300 မွ သိန္း 400 ထိ
*#အ​ေရှ့ဒဂုံ (131) ရပ်ကွက်၊ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်၊အင်ကြင်းလမ်းမကျောကပ်၊ လမ်းသွယ်တွင်၊မြေကွက် ေရာင်းချင်ပါတယ်**...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9959037 အတွက် Min Mahar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🏡ရန်ကုန်မြို့ 🏡အရေှ့ဒဂုံမြို့နယ် 🏡7 ရပ်ကွက် 🏡ပေ ၂၀ ပေ ၆၀ 🏡ပျဥ်ထောင်အိမ် အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9890321 အတွက် တက်နေဝန်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09448025742, 09254607900, 09268858885, 09420107021
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၇ရပ်ကွက် တထပ်ပျဥ်အိမ် ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9864939 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. ပိတ်ရန်